Kungathatha isikhathi esingakanani ukujikeleza umhlaba wonke? - Umjikelezo
Main > Umjikelezo > Ukujikeleza umhlaba - uxazulula kanjani
Ukujikeleza umhlaba - uxazulula kanjani
Kungathatha isikhathi esingakanani ukujikeleza umhlaba wonke?
Kuzothatha isikhathi esingakanani ukugibela ibhayisikiliukuvakashaemhlabeni jikelele? Okungenaniibhayisikiliukuvakashaemhlabeni wonke kungathathawena iminyaka engu-1.5 kuya kwengu-2. Kepha kungancika kokuhlukahluka okuningi. Isivinini esimaphakathi ongalindela ukuhamba ngaso ukuvakasha okugcwele ngokupheleleibhayisikilikukhona phakathi kuka-10 kuye ku-20 km / h (isilinganiso esingu-15 km / h noma amamayela ayi-9.3 ngehora).14 2019.
Sanibonani bantu, nayi iJin evela kuuniverswithme.com. Ngigibele ngaphezu kwamakhilomitha angama-84,000 (52,000 mi) emhlabeni wonke kumazwekazi ayisithupha.
Kule ndatshana, ngizokhuluma ngokuthi kungadla malini ukujikeleza umhlaba ngesipiliyoni sami kanye nokunye okuhlangenwe nakho okuvela kubagibeli bamabhayisikili engizwile ngabo nangocwaningo lwe-inthanethi. Okokuqala, ake sikhulume: kusho ukuthini ukuhamba ngebhayisikili emhlabeni? Amakhilomitha amangaki? Mangaki amazwe? Akunampendulo kulokho. Ngokuvamile, abagibeli bamabhayisikili balandela imizila emithathu emikhulu. 1.
Ukusuka eYurophu kuya e-Asia noma e-Asia kuya eYurophu (kanye neNew Zealand ne-Australia) 2. Ukusuka eNyakatho Melika kuya eNingizimu Melika noma okuphambene nalokho 3. Ukusuka eGibhithe kuya eNingizimu Afrika noma kolunye uhlangothi Yebo ungahamba ngezinye izindlela.
Ngikhuluma ngomqondo ojwayelekile. Lapho abantu begibela komunye wale mizilaBethi 'Ngihamba ngebhayisikili umhlaba' Kuthatha isikhathi esingakanani ukwenza omunye wale mizila? Kuya ngabantu. Ubuncane izinyanga eziyisithupha kuya ezinyangeni eziyi-8 Isilinganiso unyaka owodwa unyaka nohhafu womzila owodwa, futhi uma uhambo lude kungaba yiminyaka emi-3 kuye kwengu-4 Lapho abantu bexuba imizila emibili, i-Real Long Trip ingafana neminyaka engaphezu kwemihlanu uma uhlanganisa imizila emithathu.
Imvamisa kuba nzima ukuhlanganisa imizila. Ngoba ukuwela ulwandle kudinga imali eyengeziwe, isikhathi nesibindi sokuhlola izwekazi elisha. Umzila odume kakhulu usuka eYurophu uye e-Asia.
Okulandelayo kuvela eNyakatho Melika kuya eNingizimu Melika. Akunandaba ukuthi uhamba muphi umzila, izindleko zokuhamba azishintshi kuwo wonke amazwekazi. Ake ngikuchazele ukuthi kungani izindleko zingashintshi yize kuyizwekazi elehlukile.
Kunezinto ezine eziyinhloko ozobe uzisebenzisa kakhulu ohambweni lwakho. Okokuqala, Ezokuhamba, Okwesibili, Indawo yokuhlala, Okwesithathu, Ukudla, Okwesine, iVisa, Umshuwalense, Ukuvakasha, Ukulungiswa nokunye. Okokuqala, abagibeli bamabhayisikili bonga imali eningi ezintweni zokuhamba ngoba akudingeki bagibele ibhasi, isitimela noma indiza kaningi.
Lokhu kuyinzuzo enkulu kakhulu yokuhamba ngebhayisikili emhlabeni wonke. Okwesibili, abagibeli bamabhayisikili baphatha izinto zokukhempa abangachithi imali eningi lapho behlala khona. Ubachitha izikhathi ezimbalwa ngenyanga njengasehhotela noma ehostela eshibhile.
Futhi ayizithinti izindleko zakho zenyanga. Ngoba akwenzeki kaningi. Okwesithathu, abagibeli bamabhayisikili abachithi imali eningi ohambweni ngoba babona izinto eziningi ezinhle ngenkathi behamba ngamabhayisikili ngasolwandle noma ezintabeni.
Okwesine, imali ye-visa incike lapho uvela khona. Uma unepasipoti eqinile, ingahle isuke ku- $ 200 iye ku- $ 500 ngomzila ngamunye. Isondlo futhi singaba kusuka ku- $ 200 kuye ku- $ 500 ngomzila ngamunye.
Futhi konke lokhu kuyefana kuwo wonke amazwekazi ngoba abagibeli bamabhayisikili bahamba ngendlela elula. Ngakho-ke kulapho kuvela khona umbuzo obaluleke kakhulu. Udinga imali engakanani inyanga ngayinye ukuhlola umhlaba? Udinga okungenani u- $ 300 ngenyanga wegumbi nebhodi.
Lokho kungama- $ 10 ngosuku ama- $ 3,600 ngonyaka. Uzodinga u- $ 1,200 wokuvakasha, ukugcinwa, nokunye. Ngakho-ke udinga okungenani u- $ 5,000 ukuhamba emhlabeni jikelele.
Kepha kuthiwani ngokuthenga kokuqala? Kuya ngabantu. Uma ungenayo igiya lokuhamba ngebhayisikili nekamu, uzodinga okungenani u- $ 2,000. Uma usuvele unakho konke, okudingayo ngama- $ 500 wezinto ezingeziwe.
Ngaso sonke isikhathi ngicabanga ukuthi amagiya amakamu abizayo abaluleke kakhulu kunamabhayisikili abizayo. Ukuba nezimpahla zokukhempa ezinhle, ezibizayo kungenza uhambo lwakho lube lula. Uma unebhayisikili elibizayo elibiza cishe u- $ 3,000, alishintshi kakhulu ngohambo lwakho.
Lo akuwona umjaho ongadingi ukuthi uhambe ngokushesha. Ngibone abanye abagibeli bamabhayisikili behamba ngamabhayisikili ashibhile kakhulu nazo zonke izinto ezishibhile. Ngakho-ke kungenzeka ukuthi ungavele uqale ngama- $ 500 nje kukho konke.
Ngakho-ke udinga malini isiyonke ukuze uzungeze umhlaba? Udinga okungenani ama- $ 7,000 kufaka phakathi amagiya nakho konke ukuhlola umhlaba. Kumele ngikutshele ukuthi lesi yisabelomali esincane kakhulu ngakho-ke kungaba nzima kakhulu ukusinda. Kepha ngandlela thile kumnandi ukuthi abagibeli bamabhayisikili abaningi basendleleni nalesi sabelomali ngaphandle kwezinkinga ezinkulu.
Ngakho-ke ungakwenza uma ufuna. Yiziphi ezinye izabelomali ezikhona? Abanye abagibeli bamabhayisikili abahlanyayo bahamba ngo- $ 2,500 ngonyaka. Futhi angikwazi ukucabanga ukuthi kunjani.
Kwakunzima kakhulu kimi ukuhamba nge $ 5,000. Ngakho-ke, i- $ 2,500 ingaba nzima impela. Kepha kusengenzeka ngoba abanye abantu bayakwenza futhi.
Ngesabelomali sonyaka esingu-5 000, ngangikwazi ukuhlala emahhotela ashibhile noma emahostela kwesinye isikhathi. Futhi bengingathola kuphela ukudla okungu- $ 1 - $ 3, okunzima kakhulu ukuya endaweni yokudlela ebiza ngaphezu kuka- $ 10. Ohambweni, benginokukodwa noma ezimbili kuphela ezimangazayo ngonyaka njengokuvakashela uhambo lweSerengeti safari ezintathu izinsuku, $ 300.
Uma usebenzisa cishe u- $ 12,000 ngonyaka noma ngaphezulu, uhambo lwakho luzoba lula futhi ungadla izitsha ezahlukahlukene endaweni yokudlela cishe u- $ 10. Ungenza izinkambo ezahlukahlukene ngaphezulu. Uma usebenzisa imali eningi, uhambo lwakho luzokhululeka.
Kusobala lokho. Ngendlela, uma ufuna ukuhamba ne- $ 5,000 njenge-backpacker, kufanele ube yi-hitchhiker. Isabelomali esincane njengojosaka siseduze kwe- $ 10,000 njengoba kuzodingeka usebenzise sonke isikhathi endaweni yokuhlala nasezokuthutha.
Isabelomali esijwayelekile sojosaka singama- $ 20,000 kuya ku- $ 30,000 ohambweni oluzungeza umhlaba. Njengoba ukwazi ukubona, umhlaba wamabhayisikili ubiza kuphela uhhafu wesikhwama njengoba abagibeli bamabhayisikili bengasebenzisi imali eningi endaweni yokuhlala nasezokuthutha. Ake sikhulume ngezindleko zami zohambo lokuya emhlabeni jikelele.
Lezi izindleko zami zonyaka. Angizange ngithole mali emndenini wami. Ngaqala ngama- $ 10,000 enziwe ngeCanada Working Holiday Visa.
Ngichithe kuphela u- $ 5,000 unyaka ngamunye eMelika nase-Afrika. Ngangikhathazekile ngempela ngokusinda eYurophu ngaphambi kokuya lapho ngoba ngangicabanga ukuthi kubiza kakhulu. Njengoba ukwazi ukubona, ngisebenzise enye imali eYurophu.
Kepha isizathu ukuthi ngithenge igiya lekhempu lasebusika, igiya elisha lekhamera, nesikhwama sangaphambili ngama- $ 2,600. Uma ngikususa lokho, ngichithe kuphela ama- $ 5,500 ngonyaka eYurophu. Ngakho-ke kuyafana nonyaka wami wokuqala eMelika nonyaka wami wesibili ngise-Afrika.
EYurophu, ngenxa yezitolo ezishibhile ezifana neLidl, Aldi, Carrefour, ngikwazile ukuthola ukudla okuningi okuhle nokushibhile. Ukuhamba ngebhayisikili eYurophu kwakufana nokuba nepikiniki nsuku zonke ngoba kwakushibhile ukuthenga ezitolo futhi kulula kunokuhamba ngebhayisikili eLatin America nase-Afrika. Ngisebenzise imali eningi kusukela ngo-2016 ngoba sengikhathele ukuhamba isabelomali sonyaka esingu- $ 5,000.
Futhi ngabona ukuthi ngingenza u- $ 200 kuye ku- $ 400 ngenyanga ngokwenza okuqukethwe njalo, futhi kwaqhubeka nokukhula. INew Zealand ne-Australia zibiza kakhulu. Ngakhumbula ukuthi inyanga yokuqala ngisanda kufika eNew Zealand ngo-2018, ngihlale ngilambile.
Ngangicabanga ukuthi nginesidlwana esiswini sami ngoba ngangilamba njalo. Kepha bekubiza kakhulu ukuthenga izinto esitolo. Uma unesabelomali sonyaka kuphela se-US $ 5,000 ngaphandle kwe-visa yokusebenza yeholide, kufanele uphinde ucabange ngokuhamba ngebhayisikili e-Oceania.
Ngo-2019 ngahamba izinyanga eziyisithupha ngabe sengisebenza izinyanga eziyisithupha nge-visa yokusebenza kwamaholide yase-Australia. Ngokushesha nje lapho ngihlala endaweni eyodwa yomsebenzi, ngangisebenzisa imali ethe xaxa ekuqashiseni, ekuphumeni nakwezinye izinto. Ngenxa yalokho, izindleko zanda.
Ngiyabonga ngokubuka i-athikili yami futhi ngiyethemba le ndatshana ikunikeza umbono wezindleko zokuhamba ngebhayisikili emhlabeni wonke. Uma unolwazi lokuhamba emhlabeni, sicela ushiye amazwana kuzindleko zakho. Izosiza abanye abaningi.
Esihlokweni esilandelayo, ngizokhuluma ngendlela yokwenza imali ngokuhamba ngebhayisikili emhlabeni wonke. Sizokubona esihlokweni esilandelayo. Uhambe kahle.
Eqinisweni, nansi into emnandi. Nginezinkumbulo ezinhle kakhulu lapho ngangihamba ngesabelomali saminyaka yonke sama- $ 5,000 ngoba nganginamathuba amaningi okuhlangana nabantu bendawo. Kwenze uhambo lwami lucebe ezindabeni ezahlukahlukene.
Kepha angicabangi ukuthi ngingaphinde ngikwenze ngoba bekunzima impela futhi sengikwenzile vele. Sekwanele. Kepha inhlanhla uma ufuna.
Ngabe ukhona ohamba ngebhayisikili emhlabeni jikelele?
Ngo-18 Septhemba 2017, uMark Beaumont wafika eParis eseqedile ukuzungeza okusekelwayo kwe-imbulungangebhayisikili ngezinsuku ezingama-78 amahora ayi-14, nemizuzu engama-40. Lokhu kushaye umzamo wakhe wangaphambilini ongasekelwa ngezinsuku eziyi-115 futhi washaya owedluleumhlabairekhodi ngezinsuku ezingama-44 namahora ayi-10 futhi kufanele lithathwe njengerekhodi.
Yini indlela ehamba phambili yokujikeleza emhlabeni wonke?
Umgwaqo Omkhulu Wobungane (China) Sula amanzi aluhlaza okwesibhakabhaka: Ubungane Highway, China.
Indlela Yabanqobi (ICosta Rica)
Ulwandle lwaseNyakathoUmzila Womjikelezo(EYurophu)
I-Shimanami Kaido (Japan)
KuhleHlukanisa IntabaUmzila webhayisikili(I-America esenyakatho)
IMunda Biddi Trail (Australia)
ISouth Downs Way (eNgilandi)
Ukuhamba ngebhayisikili kungumdlalo omuhle ngezizathu eziningi ezahlukahlukene, kepha ngicabanga ukuthi ibhola mhlawumbe libaluleke kakhulu, iqiniso lokuthi ungazicwilisa ezindaweni ezinhle njengalokhu ngokuthembela emilenzeni yakho ukukuhambisa manje kunemizila eminingi ehlukene nemigwaqo kepha noma yini oyithandayo, kungaba izintaba ezidlula, izindlela zebhayisikili ezithulile noma mhlawumbe izindlela ezimbalwa zomhlaba kukhona okukufanele ngakho ungakhathazeki futhi uma ufuna ugqozi ungabe usaqhubeka kusuka kithi i-gcn ihlanganisile imigwaqo yethu emihle kakhulu emhlabeni wonke ukuze ukwazi ukuhlela uhambo lwakho olulandelayo lwebhayisikili. Mhlawumbe ngiyazibuza ukuthi ngiyaphi namhlanje kodwa ngizoveza lokho ngokuhamba kwesikhathi ngoba ngesinye seziphakamiso zami ohlwini kepha okokuqala ake siqale ngomqansa wenyoka ongaziwa Lokhu kukhuphuka kunabanobuhle abayi-17 ngakho-ke kunengqondo ukuthi kufanele njengoLosse d. I-e mont vernier ibizwa nge-e mont vernier esenkabeni ye-alps eduze kwezinye ezidumile nge-ferrata ezifana ne-pol de la madelaine, lokhu kukhuphuka kwabonakala kuphela esiteji se-18 kuhambo lokuvikela okokuqala ngqa ngo-2015 futhi kwabangela ukuzwa lapho kuya ku-mon vernier Ngibheke phambili ekuzameni lokhu, ukukutshela ukuthi igama lezingxenye zezinkomo yiScotland Gaelic njengoba ngokomlando lalisetshenziswa njenge-drover.
Ummemezeli kaNabar ngiyethemba ngithole lelo lungelo Uxolo uma ngingenalo, kepha ngithemba ukuthi senginakho lokho manje iScotland akuyona leyo? aziwa ngemigwaqo yalo emihle nezinye, mhlawumbe izindawo ezingejwayelekile ezingathi kwesinye isikhathi zibe nesibonelo, okusho ukuthi kungenzeka ukuthi zihlobene nesimo sezulu. Isimo sezulu eScotland asibalekanga njengase-Ireland. Kepha iBialuk Nabar mhlawumbe ingenye yemigwaqo emihle kakhulu emhlabeni, eyaziwa nangokuthi yi-Applecross Pathit eyingxenye yogu olusenyakatho 500a umzila ozungeze iScotland, umgwaqo we-cyan markbeaumont okhuphuke ngamamitha angama-600 ngamakhilomitha ayisishiyagalolunye ngonyaka odlule okuyiwona impela ukukhuphuka okude e-UK, kepha umbono ubufanela kahle nobuhlungu bemilenze yakho njengoba uzoklonyeliswa ngemibono emangalisayo ye-Isle of Heaven.
Kuyamangaza impela. Awukwazi ukuzibamba ume nge-gn bese ubuka ngokwethuka. Siyathanda ukushayela esiqhingini saseMallorca Kumele kuthiwe kunezindawo eziningi ezahlukahlukene zokushayela esiqhingini ezinhle ngokumangalisayo, kepha indawo eyodwa yenze ukuthi ube nentshisekelo esihlokweni engingazukukhononda ngaso ngempela, ukwethembeka, ngoba umqansa omuhle oholela ngqo emaweni uma wesaba izindawo eziphakeme lokhu kungenzeka kungabi ukukhuphuka kwetheku le-sieder lase-aldermosta kuyikhaya lezindlu ezimbalwa nendawo yokudlela, kepha ungadli? kakhulu, ngoba lo mgwaqo ukuphela kwendlela engena porto uma ubunesikhathi sokujabulela ukubuka izinto futhi uthokozele ulwandle, uya ngqo phezulu futhi futhi sengivele ngikhuphuka amamitha angama-380 kumakhilomitha ayisihlanu, ngakho-ke akuyona umqansa omncane, ukuthuthela okunye kokuqwala okuhamba phambili eLaif manje, hhayi yonke i-USA Mulhollanddrive ekhuphuka isuka la ibheke entshonalanga ye-ridgecanyon emuva epaki futhi ingumgwaqo we-anepic onemibono emangalisayo yedolobha lase-la manje lihluke kakhulu kunolunye Ukukhuphuka kulokhu uhlu ukuthi indawo ibunjiwe ngabantu kunemvelo, kepha ayikwenzi kube yinto encane kangako.
Umqansa ngokwawo ucace ngamaphesenti amane, okuncane kakhulu kunokumelana engisanda kuqhamuka nakho, kepha ukukhuphuka okumangazayo okunemibono emihle ye-cityscape nemigwaqo enamagquma emangalisayo nayo. Ngakho-ke uma uthanda ukukhuphuka kwakho kancane, lokhu sekube yisixuku sabashayeli bamabhayisikili abangochwepheshe be-youdrona eminyakeni yamuva njengoba abaningi sebethuthele edolobheni beyohlala nokuqeqesha isizini yomjaho wase-Europe futhi kulula ukubona ukuthi kungani kunemigwaqo eminingi emide emide eyisicaba kodwa futhi nezindawo eziningi zezintaba futhi nesimo sezulu sihle impela imigwaqo emihle kakhulu eduzane naseDerona ngumgwaqo osogwini ohamba kahle ungaphazanyiswa kulo lonke ugu olusempumalanga yeSpain, kepha lesi sigaba ikakhulukazi sisondele eTotosa del Mar cishe amakhilomitha angama-20 inde futhi imigwaqo iyajika ijike ivuke iwele eduze koLwandle iMedithera futhi iyamangaza ngempela, kunezindawo eziningi zokuba nekhofi noma mhlawumbe nokulunywa ukudla futhi ngicabanga ukuthi lo mgwaqo kufanele ube yemigwaqo emihle kunayo yonke emhlabeni iNorway yizwe elihlaba umxhwele futhi likhaya elihle kakhulu linenani elikhulu labagibeli bamabhayisikili abahle kakhulu, manje umgwaqo owodwa omuhle kakhulu ezweni ukwenyuka kwe Izinyoka ezi-Roller noma iTroll Wall ezitholakala ogwini olusempumalanga yeNorway, iNorway yizwe elihlukile ngokukhethekile lapho kukhuphuka khona okuningi okuqala olwandle ngaphambi kokuba bakhuphukele ezindaweni eziphakeme kakhulu, kwakheke imifula nezigodi ezihlukile ezibonakala ngokushesha. ITrollstegen iyisibonelo esihle salokhu, ukuqala ebangeni elingamamitha angama-30 kunqoba amamitha angama-700 esihlabathini samakhilomitha ayisishiyagalolunye ngenhla uklonyeliswa ngokubukwa okuhle kwezinguzunga zeqhwa futhi nangombono wamachibi athile angajwayelekile.
Uma unesibindi ngokwanele, kukhona iTroll Vegan Triathlon, esebenzisa ukwenyuka koTroll Wall bese kuba ithanga elingaphandle komgwaqo esiqongweni sentaba oh kuzwakala njengelinye labangane bethu e-gtn akunjalo, masithembeke , Ngingathanda ukusho ukuthi ukuhamba kuzwakala kumnandi. I-Eland Valley iseduze kakhulu ne-gcn hqyeah kuyezwakala ukuthi unezigidi zamamayela ukusuka noma yikuphi lapho ushaya imizila ethile yamatshe ebabazekayo i-Inland Valley engekho? Ukushoda kwemigwaqo emihle egandayiwe futhi kuzwakala njengendawo enhle ye-canyonrail yami, akunjalo, ngokwesibonelo umzila womjikelezo kazwelonke u-81 usuka e-Eland Village uye e-AberWEISworth ogwini olulandela imigwaqo evulekile yezwe evulekile eMid Wales enokubukwa okuhle yamachibi amahle, futhi ungaphinde uphume emgwaqweni ukuze uthole injabulo ethe xaxa? emikhakheni embalwa yobhuqu lena mhlawumbe umzila waseBrithani ongaconsi phansi owenziwe ngezindawo eziningi ezinamathafa amancane nezindawo eziningi ezikhuphukayo ukuze izinto ziqhubeke futhi, kuhlu lwamabhakede lwabashayeli abaningi base-UK futhi asikwazi ukulinda yehla uyithokozele maduzane Kulungile, lokhu kungeza kwami ​​kuhluI-Southeast Ireland ekugcineni kwayo le ndlela yiCopper Coast Road umzila omuhle osuka e-ross lair inwexford uye e-dugarvanin waterford amakhilomitha ayi-166 isiyonke ngakho-ke yinde impela kodwa lokhu i-ireland ngombono wami omkhulu kunayo yonke indawo engiyibonile futhi ngenze nezikhathi ezithile zokuqeqesha ubusika okwenzekile ngiyakutshela ukuthi kuyisipiliyoni manje kunamadolobha amancane amancane nezindawo zokucisha ukuluma ukudla, futhi bane-waterford i-greenway oyibonile esethulweni salesi sihloko Ubude obungamakhilomitha angama-40 buhlukanise indlela yomjikelezo kulo mzila. Ngicabanga ukuthi le ndawo iyintandokazi yami ngokubukwa kolwandle, lapha unakho lokhu? Imayini yethusi endala enikeza lo mzila igama layo, umgwaqo ogwini lwethusi kanye nedolobha laseBun Mahon ngemuva futhi bathande lo mgwaqo oyintandokazi obabazekayo okufanele ube sohlwini, manje osendleleni ehluke ngokuphelele neShimanani-Kaido umzila wasejapan, ongaweleli elilodwa, hhayi amabili, kepha sekugcwele amabhuloho ayisithupha ngaphezu kwamakhilomitha angama-70 ukusuka esiqhingini esikhulu saseJapane iHoncho kuya esiqhingini esincane saseShikoku futhi awele iziqhingi eziyisithupha kule nqubo. ukubukwa kubude obude bendlela ye-shimanan al-qaida kufanele ngempela ukuyibona futhi nakanjani kunethuba lokuzidela kwe-epikrad lapha ngicabanga ukuthi ungazibuza ukuthi kungenzeka yini ukuthi kube nomthamo omningi emzileni manje, kodwa kukhona indlela ehlukanisiwe yebhayisikili ubude obugcwele beShimananal-Qaeda, okusho ukuthi ungawujabulela umzila ngaphandle kokukhathazeka noma ingcindezi futhi uyazi ukuthi iJapan yisizwe esinothe ngamagugu ngamabhayisikili namasiko futhi asikwazi ukulinda ukwenza lo mzila njengamanje s kuyinto elula kakhulu ye-asphalt e-Iceland futhi mhlawumbe iyamangalisa, kodwa kunendawo eyodwa ekhetheke kakhulu.
INhlonhlo Yeqhwa entshonalanga ye-Iceland iyindawo ephawulekayo yokugibela ibhayisikili. Umugqa ogcwele womgwaqo ozungeze inhlonhlo ingamakhilomitha ayi-150, ngakho-ke akunjalo. Impela umzila omfushane, kepha lowo ozokuvuza ngokubukwa okumangazayo ngosuku olucacile.
Ungabona intaba embozwe yiqhwa iSneyfel Snes Jokel, engamamitha ayi-1500 ukuphakama. Isikhungo somhlaba kufanele sibe ngaphakathi kwentaba, ngokusho kukaJules Vernes Roman kusuka ngo-1864, uma uthanda izindawo ezingenalutho, izimpande ezikude namathafa amahle, khona-ke i-iceland kanye nenhlonhlo yaseSchneifeldt Snes nakanjani ngizokutshela lokho cabanga ngakho nakimi, ngabe yini obungathanda ukuyifaka ohlwini esingakulinganisanga lapho sicela usazise emibhalweni engezansi futhi ngiyethemba ukujabulele ukushayela kwami ​​okuncane ngomgwaqo iCopper Coast Road lapha eSoutheast Ireland futhi lapho nje isimo sezulu sihle futhi ngilapha nge-Grail, kungcono ngiye ezintabeni ngibheke ukuthi ngingayithola yini eminye imizila emisha noma imigwaqo emihle, ngiyabonga ngokubuka, sizokubona kungekudala, inhlanhla
Yebo,ibhayisikili lingakwaziUsizoulahlekelwe ngamafutha esiswini, kodwa kuzothatha isikhathi. Ucwaningo lwamuva lubonise njaloukuhamba ngebhayisikiliingahle ithuthukise konkeukulahleka kwamafuthafuthi ukukhuthaza isisindo esinempilo. Kuukunciphisaisiyonkeisisuibhande, ukuvivinya umzimba ngokulingene, njengeukuhamba ngebhayisikili(kungaba ngaphakathi noma ngaphandle), kuyasebenza ukwehlisaisisindo samafutha.
Uma inhloso yakho ukunciphisa isisindo esithile, khona-ke ukuhamba ngebhayisikili kuyindlela enhle yokukwenza. Futhi ezinye izindaba ezimnandi ukuthi, uma ukuhamba ngebhayisikili kungumgomo wakho okuwukuphela kwakho, ukwehlisa isisindo ngenkathi ugcina ukusebenza kuzokukwenza usheshe. Yebo, ngakho-ke isibonelo umgibeli wamakhilogremu angama-75 akhuphuka intaba ende angafika phezulu ngomzuzu ngokushesha uma elahlekelwa amakhilogremu ama-2 - yebo, futhi athathe lesi sibonelo ngokweqile, ukuthi Umehluko mkhulu.
Ngakho-ke umgibeli wamakhilogremu angama-90 uzokonga cishe imizuzu emihlanu nohhafu uma bekwazi ukwehlisa amakhilogremu ayi-10 ngaphansi kwezimo ezifanayo ncamashi, pho izindlela ezihle zokwehlisa isisindo? Nazi izeluleko ezinhlanu ezisheshayo nezilula ezizokusiza ukwenza lokhu. - Eminyakeni edlule sonke satshelwa ukuthi indlela engcono yokwehlisa isisindo esithe xaxa ukuchitha isikhathi esiningi kulokho okwaziwa ngokuthi 'indawo yokushisa amafutha'. Umbono uthi ngamandla aphansi uzoshisa iphesenti elikhulu lamafutha uma uqhathanisa nama-carbohydrate kunalokhu ngamandla - futhi kulungile uma uthola usuku lonke lokuzivocavoca umzimba, kepha iqiniso ukuthi iningi lethu alinakho lokhu okunethezeka .
Ngakho-ke, uma uzama ukuziqeqesha ngenqubo yesikhathi esigcwele ukuqina okuphezulu kuyinto leyo - yebo, uzoshisa amakhalori amaningi ngehora ohambweni olunzima impela, olunamandla kunokuhamba umgwaqo omude esihlalweni. Ekupheleni kosuku, ukunciphisa isisindo kumayelana nokushisa ama-calories amaningi kunalokhu okudlayo. Futhi, unenzuzo eyengeziwe yokuthi ulambile kancane ngemuva kokushayela ngamandla kunangemva kokushayela okude, okuhamba kancane, ngakho-ke mancane amathuba okuthi udle ngokweqile uma ungena emnyango. - Lapha e-GCN sinezikhathi ezithile ezimfushane, ezinamandla ongazenza endlini.
Uma ufaka phakathi okubili noma kathathu kokuzivocavoca kwakho kwamasonto onke, usendleleni efanele. ♪ - Amanzi okuphuza akulungele impela wena, futhi hhayi lokho kuphela, angaba yinto yokuncisha ukudla futhi. Manje, ngemuva kokuphuza kahle, ngeke usazizwa ulambile.
Ngakho-ke nali iqhinga elincane elihle kuwe. Uma uqala ukusuka ohambweni lwakho, yiba nengilazi enkulu impela yamanzi, mhlawumbe upende noma kunjalo, ngaphambi kokudla kwakho. Izosidambisa isisu sakho, ngakho-ke ngeke ulambe ngenkathi udla ngakho-ke mancane amathuba okuthi udle ngokweqile.
Futhi ungakwenza lobu buqili ngaphambi kokudla okuyinhloko kosuku futhi. Ukudla kwasekuseni, isidlo sasemini nedina ngisho nangaphambi kokudla kwasekuseni nantambama. Izinsuku ezinhle, ukuhalalisela. ♪ ♪ - Ithiphu inombolo yesithathu.
Yidla okuncane futhi kaningi lapho ushayela imizuzu engaphezu kwengu-90. Kungase kuzwakale njengokuphikisana okuncane manje ukuze udle okungaphezu kwalokho ovame ukukwenza, ikakhulukazi lapho uzama ukunciphisa isisindo, kodwa vele usibekezelele isikhashana bese sizochaza. - Yebo, bona ukuthi Njengoba uzama ukunciphisa isisindo, kunokuthambekela kokunciphisa inani olidlayo ngenkathi uzivocavoca, kodwa njengoba kushiwo ngaphambili lokhu kungaholela ezinkingeni zokudla ngokweqile lapho ufika ekhaya.
Ngakho-ke uma udla okuncane futhi kaningi phakathi nohambo lwakho, cishe uzothola ukuthi awulambile kakhulu lapho ungena emnyango ngakho-ke mancane amathuba okuthi udle ngokweqile. Ngabe unakho okusele? - Cha, konke sekuphelile. - Aargh. ♪ - Kwesokudla, okulandelayo kunokuthile okuphathelene nenombolo yephuzu elilodwa futhi lokho ngamandla amakhulu.
ukuba ngumfundisi we-spin
Ngakho-ke noma ngabe awuhleleli ingxenye yesikhawu esigcwele ngokugcwele, ungazenzela okuningi okuhle ngokuziphonsa ezikhaleni ezinamandla kakhulu ekupheleni kohambo lwakho - kunjalo. Ucwaningo lukhombisile ukuthi ukusetshenziswa kwangemuva kokuzivocavoca umoya kungasiza ukushisa amafutha. Indlela engcono kakhulu yokungena kulesi sifundazwe ukwenza ukuziqinisa ngamandla kuze kube sekupheleni kohambo, futhi ngaleyo ndlela, umzimba wakho usazoshisa amathani ama-calories noma ngabe uhleli kusofa.
Kuhle kangakanani lokho - Yebo, kungcono kakhulu. - Ithiphu yethu yokugcina ukuzibekela imigomo bese siyibhala kanye neshadi lesisindo. Manje, qiniseka ukuthi ugcina izinhloso zakho zifinyeleleka ngoba akukho okubi kakhulu kunokubeka izinhloso ezingafinyeleleki.
Bese uzibhala phansi bese uzigcina lapho kungenzeka uzibone khona, njengasemnyango wesiqandisi, futhi ngaleyo ndlela, uzokwazi kakhulu ukunamathela kuhlelo lwakho. - Yebo, futhi njengoba uMat esho, kufanele futhi unake isisindo sakho njalo. Baningi abantu laphaya abaphakamisa ukuthi ungazilinganisi nsuku zonke, kepha angicabangi ukuthi lokho kuyinto embi uma nje ukwenze ngasikhathi sinye nsuku zonke.
Kuzoba nezinsuku lapho le nombolo inyuka kancane, kepha uma ugcina uhlobo oluthile lweshadi lesisindo sakho kufanele, ngokuhamba kwesikhathi, ezinyangeni ezimbalwa, ubone ukuthi ukuthambekela okujwayelekile komugqa kwehlele enjongweni yakho yokugcina . ♪ ♪ - Futhi manje ithiphu kokungafanele ukwenze. Yebo, lokhu yinto abaningi bethu okungenzeka babeluleke ngayo noma babona abanye abantu beyenza eminyakeni edlule, kepha ikakhulu eFrance - kepha, ukugoqa izingubo ezingaphezulu ukuze wenze ujuluke kakhulu kuholela ekunciphiseni isisindo ngokushesha futhi okungaba namandla.
Kodwa-ke, konke kungamanzi. Ngakho-ke akukhona ukuthi kungaba yingozi kuphela, kepha uma usufakwe amanzi anele kahle sonke isisindo sizobuyela emuva - ungakwenzi. ♪ ♪ - Ngakho-ke unayo.
Ukuze wehlise isisindo, kufanele uhlele uhambo oluningi oluphakeme kakhulu, uphuze amanzi ngamasu, udle njalo ohambweni olude, ufake izikhawu ezimbalwa ekupheleni kohambo lwakho olujwayelekile, uzibekele imigomo bese uzibhala phansi. Ekugcineni, ungagqoki ngokweqile ngomzamo wokwehlisa isisindo. Ilula kakhulu, empeleni - yebo, ilula kakhulu.
Yebo, sishilo izindatshana zethu zokuzivocavoca zasendlini ngaphambili. Ngakho-ke uma uqhafaza phezulu lapho uzomiswa uqonde endaweni yethu lapho sinokuzivocavoca okukhulu okukhulu kakhulu. Noma ngezansi nje, mina noMat senze udaba olumayelana nezisindo zamabhayisikili futhi luthinta ukusebenza kwakho ekukhuphukeni.
Futhi abanye futhi - Ikakhulukazi. - Yebo.
Kufanele ujikeleze amamayela amangaki ngosuku?
Umuntu ojwayelekile oqhuba ibanga elideibhayisikilitour kuthandaumjikelezophakathi kuka-40 no-60Izinkulungwane(Amakhilomitha angama-64 96) lilinyeusuku. Kodwa-ke, amabanga amafushane futhi made kunalokhu ajwayelekile. 40 kuya ku-60Izinkulungwaneibanga elijwayelekile lansuku zonke elinconyelwe iningiibhayisikiliizivakashi.
Ngabe ukuhamba ngebhayisikili kungcono kunokugijima?
Inani lamakhalori owashisayo kunoma yikuphi ukuvivinya umzimba lincike ekujuleni nobude besikhathi owenza ngaso. Ngenjwayelo,egijimaisha ama-calories amaningiukwedlula ukuhamba ngebhayisikilingoba isebenzisa imisipha eminingi. Noma kunjalo,ukuhamba ngebhayisikiliUmnene emzimbeni, futhi ungakwazi ukukwenza isikhathi esidenomaNgokusheshakuneungakwazigijima.
Ingabe ukuhamba ngebhayisikili kungcono kunejimu?
UKUSEBENZA. Singathanda ukukucabanga lokhoukuhamba ngebhayisikilinokuphakamisa izinsimbi kancane kuijimuhamba ngokubambisana.Ukuhamba ngebhayisikiliizokusiza ukuthi ushise inani elibalulekile lamakhalori esikhathini esincane. Kuye kwaqashelwa ukuthi kungenzeka ukuthi ufake umfutho omkhulu lapho uzivocavoca ngaphandle (njengokuthiukuhamba ngebhayisikili).19. 2020.
Ngabe kungcono ukugibela ibhayisikili noma ukugijima?
Ngenjwayelo,egijimakusha ama-calories amaningi kuneukuhamba ngebhayisikilingoba isebenzisa imisipha eminingi. Noma kunjalo,ukuhamba ngebhayisikiliUmnene emzimbeni, futhi ungakwazi ukukwenza isikhathi eside noma ngokushesha ukwedlula ongakwenzagijima.
Yebo,ibhayisikili lingakwaziUsizoulahlekelwe ngamafutha esiswini, kephakuthandathatha isikhathi. Ucwaningo lwamuva lubonise njaloukuhamba ngebhayisikilikungathuthukisa ukulahleka kwamafutha ngokuphelele futhi kuthuthukise isisindo esinempilo. Kuukunciphisaisisu sonke sesibeletho, ukuvivinya umzimba okulingene ngamandla, njengeukuhamba ngebhayisikili(kungaba ngaphakathi noma ngaphandle), kuyasebenza ukwehlisaisisindo samafutha.02.02.2021
Yini odinga ukuyazi ngokujikeleza komhlaba wonke?
Umjikelezo Womhlaba Wonke usemishini yokwakha isitolo esihle kakhulu se-Mountain Bike emhlabeni & amp; fafaza imidiya emangalisayo ye-MTB ngaphezulu kwalokho! Sikhona ukuxhasa abantu abajabule ngamabhayisikili. Ku-inthanethi, okusesitolo noma emizileni. Thenga izingxenye ze-MTB, bukela amavidiyo, funda izindatshana, zibandakanye & amp; gibela nathi!
Ngubani umhleli wangaphambili weCycle World?
U-Allan Girdler, owayengumhleli omkhulu weCycle World, umbhali ovelele, isazi-mlando, nomjahi wempilo yonke, ushonile. Inkampani iqinisa ezinye izici zokuthuthuka kwayo kwemijaho yezimoto nayo. Eminyakeni engamashumi amane edlule, iCycle World ihloniphe izithuthuthu Ezilishumi Ezihamba phambili unyaka nonyaka.
UJin ube nebhayisikili isikhathi esingakanani emhlabeni jikelele?
Ukuhamba ngebhayisikili Emhlabeni Wonke - YouTube === Sawubona, nguJin === ngihambile nebhayisikili lami kusukela ngoSepthemba 2011 ngidlula eNyakatho Melika, eLatin America, e-Afrika, e-Europe, Middle East, Central Asia, Southea